कसरी गरिन्छ कपाल प्रत्यारोपण ? (भिडियोसहित) | Hamro Doctor News
कसरी गरिन्छ कपाल प्रत्यारोपण ? (भिडियोसहित)
डम्र्याटोलिस्ट तथा हेयर ट्रान्सप्लान्ट सर्जन डा. रुपक घिमिरेका अनुसार नेपालमा पछिल्लो समय कपाल प्रत्यारोपण गराउनेको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । यो सेवा २० वर्षदेखि ७० वर्षसम्मका मानिसलाई दिन सकिने डा. रुपक घिमिरेको भनाइ छ ।
मानिसको सुन्दरतमा कपालले पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । स्वस्थ, शुन्दर कपाल के महिला के पुरुष जसको पनि पहिचान र सुन्दरताको विषय हो । तर, दुर्भाग्यवश कपाल झरेर रुप नै फरक भएका हामीले धेरै व्यक्ति देखेका छौं । विशेष गरी पुरुषमा यो समस्याले बढी छ । कपाल झरेर तालु भएका धेरै व्यक्ति अस्थायी र झन्झटिलो ‘विग’ लगाएर हिँडेको हामी देख्छौं । कपाल उमार्ने तथा झर्नबाट रोक्ने भन्दै भ्रमपूर्ण औषधि बेच्नेहरू पनि बजारमा प्रशस्तै भेटिन्छन् । जसको विश्वासमा परी पैसा खर्च मात्रै भइरहेको हुँदैन स्वास्थ्यमा पनि असर पर्ने डा. रुपक बताउँछन ।
कपाल कसरी प्रत्यारोपण गरिन्छ भन्ने विषयमा डा. घिमिरे भिडियो सन्देश दिएका छन् ।
Last modified on 2019-12-24 12:36:19